Suuqa Gaalkacyo oo Maanta La Furay Sadax Maalmood Kadib oo Uu Colaad U xirnaa. – Shabakadda Amiirnuur
November 28, 2017 7:51 am by admin Views: 268
Suuqa magaalada Gaalkacyo oo muddo sadax maalmood ah u xirnaa colaad dhx martay laba malleyshiyo oo ka wada tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa maanta dib loo furay.
Wararka ka imanaya Gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in ganacsatadu billaabeen iney furan mehradahooda halka dad weynuhuna dukaameysanayaan kadib markii waan-waan ay sameeyeen odayaasha dhaqanka lagu kala qaaday malleyshiyada.
Ganacsatada ayaa sheegay in dagaalkii todobaadkii hore ka dhacay magaalada uu saameyn ku yeeshay shaqadooda iyo nolol maalmeedkooda.
Labada gudoomiye ee Mudug ugu kala magacaaban labada maamul ayaa warbaahinta maxalliga ah ka sheegay iney nabaddu tahay shey muhim ah oo aan laga maarmi karin, inkastoo aaney ka waramin sida lagu baajin karo colaadan soo noqnoqotay.
Gaalkacyo oo ah magaalo aad u yar ayaa waxaa ka dhisan labo maamul iyadoo xuduudo loo kala sameeyay dadkii ehelka ahaa ee wada degganaa, waxaana xusud muda in dagaalkii usbuucii hore ka dhacay magaalada uu sabab u ahaa kadib markii labada dhinac ay isku qabteen cidda canshuurta ka qaadanaysa mid kamid ah bakhaarada ku yaalla martamaha magaalada.